AKHRISO Xaqiiqooyin & Xogo kaa qarsoon oo ku Saabsan Dagaalka Soomaalida & Oromada. – Xeernews24
AKHRISO Xaqiiqooyin & Xogo kaa qarsoon oo ku Saabsan Dagaalka Soomaalida & Oromada.
17. September 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Adisu Arega oo u hadlay dowlad deegaanka Oromiya ayaa BBC sheegay in 18 qof oo 12 ka mid ah ay Soomaali yihiin ay ku dhinteen colaadda hadda taagan.
Haseyeeshee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku doodaysa in 30 Soomaali ah lagu dilay magalada Awaday ee gobolka Oromiya.
Dadka colaadda ka barakacay oo lagu qiyaasay 30 kun ayaa xeryo kumeel gaadh ah looga sameeyay garoon ku yaal magaalada Harar iyo saldhigyo ay boolisku leeyahay.
Mas’uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu baaqay hay’adaha gargaarka inay u gurmadaan dadka barakacay.
Deegaannada Oromada iyo Soomaalida ayaa dhul ahaan ah kuwa ugu weyn dalka Itoobiya, waxaana ay wadaagaan soohdin gaadhaysa 1,400 km.
Sanadkii 2004, afti laga qaaday 420 tuulo ama waxa Itoobiya looga yaqaan qabalee oo lagu muransanaa, ayaa boqolkiiba 80 loo go’aamiyay in ay ka tirsan yihiin gobolka Oromiya.
Arintaasi ayaa dhalisay in kumannaan Soomaali ah ay ka barakacaan tuulooyinkaasi, ayagoo ka cabsanaya inay dhibaato uga timaado Oromada.
Go’aankaasi ayaan weli la hirgelin, waxaana la sheegayaa inay qeyb ka tahay colaadda hadda soo cusboonaatay.
Haseyeeshee maamulka Jigjiga ayaa beeniyay eedeymahaasi, waxaana uu ku tilmaamay maamulka Oromiya mid xidhiidh dhoow la leh jabhadda Oromo Liberation Front ee ay dowladda Itoobiya u aqoonsan tahay argagixiso.
Ma kasii dari doontaa colaaddu?
Maadama labada qowmiyadood ay wadaagaan soohdin dheer, isla markaana leeyihiin xoolo dhaqato reer guuraa ah, waxaa adag inay kala maarmaan.
Sidoo kale colaadda u dhexeysa labada qowmiyadood ayaa si fudud ugu baahi karta deegaannada kale iyo weliba deriska Itoobiya, maadaama ay dhinacyadaana wada degaan.
Waxa lagu soo waramayaa in colaadda hadda taagani ay keentay in laba qof oo Oromo ah lagu dilo magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland.
Dhanka kale, dad ka barakacy colaaddan ayaa lagu soo warramayaa inay gaadheen magaalada Moyale ee dhanka Kenya, halkaasoo ay marar badan ku dagaallameen Soomaali iyo Oromo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/soma-oro.jpg 219 230 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-17 10:00:452017-09-17 10:00:45AKHRISO Xaqiiqooyin & Xogo kaa qarsoon oo ku Saabsan Dagaalka Soomaalida & Oromada.
VIDEO: Maroodi Jid gooyo u Dhigtay Gaadhi Raran Oo Fal Xaasidnimo Ah Ku Sam... Daawo dad reer jabuuti ah oo ka badbaaday xasuuqi loo geystay Soomaali aan waxba...